Kedu ka m ga-esi mebie ọgwụ riri m afọ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Stepskwụsị ọgwụ iri ahụ shuga 10 - ngwọta bara uru
Stepskwụsị ọgwụ iri ahụ shuga 10 - ngwọta bara uru
Kedu ka m ga-esi mebie ọgwụ riri m afọ?
Agbajiị addictionụ ọgwụ ọjọọ
Wepụ nri ndị nwere shuga n’ahụ. Anwala ọnwụnwa site n'ichekwa swiiti, kuki, na ndị ọzọ dị elu-shuganri gị kọbọd na friji.
Nwee nri dị ụtọ n’onwe gị. Malite na tii nwere okpukpu kporo oku, yogọt mara mma, na oatmeal na-adịghị mma.
Lelee maka zoro ezoshugana nri.
Rie nri ụtụtụ.
Mwepu shuga dị ka iwepụ opioid. Aga m ekwu maka nke a taa. Abụ m Dr Tracey Marks, Ọkachamara, na ọwa a taa bụ maka mmụta ahụike ọgụgụ isi na mmelite nke onwe.
Aga m ekwu maka ogwu riri ahu. Edere m nke a na nkwupụta ikuku n'ihi na ọ bụghị na ọ bụ okwu njiri uche, kama ọ bụ omume dị ka ahụ riri ahụ, n'ihi ya, m ga-ekwu maka otu esi agwa ma ọ bụrụ na ị nwere ọgwụ shuga na otu ị ga-esi pụọ na ya. Gịnị kpatara nke a ji dị mkpa site n'echiche ahụike ahụike ọgụgụ isi? Maka na iwepụ shuga ọ bụghị naanị na ị ga-enweta mgbaàmà anụ ahụ dịka isi ọwụwa, bloating, kamakwa mgbakasị na mwute.
O nwedịrị ike ịdị ka ịda mba ma ọ bụ nchegbu. Ọ bụrụ n’inyocha isiokwu a, ị ga-ahụ na oke shuga na-amụba endorphin nke ahụ gị na-emepụta. Endorphins bụ opioids anụ ahụ.
Ọ bụ ihe ị na-enweta na mmega ahụ siri ike dị ka onye na-agba ọsọ. Ahụ gị na-emepụta kemịkal nwere otu ihe ahụ dịka opioids. Ya mere olee otu esi agbaji usoro a? Nke a bụ ebe ihe na-enweta ntakịrị aghụghọ.
Iri riri ahụ abụghị mgbe ị na-eri ọtụtụ swiiti. N’ezie, ị nwere ike ịribiga shuga ọ bụrụgodi na ịnweghị ihe i chere dị ka eze mara mma. Ọtụtụ nri anyị na-eri kwa ụbọchị etinyekwu sugar na ụfọdụ ihe atụ nke a bụ pasta ihendori, ofe, yogọt, akwa salad.
Ihe obula n’eme ka abụba n’etinyeghi shuga tinye ya ka o karia ya. Mgbe ahụ enwerekwa sauces na ngwa nri dị ka ketchup, mọstad, Mayonezi, ọbụlagodi. Echere m na ọ dị ebe niile na ihe ihere bụ nri a kpọnwụrụ akpọnwụ dị ka nri na-adịghị mma na ihe ndị dị ka nke ahụ na-agbakwunye na shuga.
Ya mere, ọ bụ shuga dị na nri ndị a nwere ike itinye aka na gị ịnwe ma ọ bụ ịmalite ị addictionụ ọgwụ shuga. Na nke a bụ ụfọdụ ihe nrịba ama na ị na-eri shuga. Have nwere ezigbo oge ịsị mba n'ihe ndị na-atọ ụtọ.
Nụ agụụ na-agụkarị nri, ọbụlagodi mgbe agụụ anaghị agụ gị. Na-enweta ọnọdụ dị mkpirikpi ma ọ bụ ike nke ike mgbe ị na-eri nri ahụ wee daa ngwa ngwa. Mgbe ị gbalịrị igbutu ihe, ọ na-agụsi gị agụụ ike ma ọ bụ ikekwe iwepu ya.
Chetakwa, nke a nwekwara ike itinye aka na nri starchy dị ka french fries, dị ka nri starchy dị elu na carbohydrates, nke na-agbari n'ime shuga ka ha wee belata shuga gị. Nwere ike ịgbalị ịkwụsị Coldturkey mgbe niile, mana nke ahụ agaghị arụ ọrụ n'ihi na ọ siri ike. Ihe ịchọrọ ime bụ ịtụgharị uche gị na-atọ gị ụtọ ịhọrọ nri na-atọ ụtọ, ị nwere ike ime nke a site n'iji nwayọ wepụ ihe oriri na shuga agbakwunye.
Ugbu a ịkwesịrị ịgụ aha ahụ ma ka ị na-agụ aha ahụ chọọ nke ọ bụla n'ime ihe ndị a na-agwa gị na nri gị agbakwunyela shuga. Somefọdụ n'ime ihe ndị ahụ bụ nectar agave, sirop osikapa na-acha nchara nchara, nnukwu frukos sirop, dextrose, ihe ọ sugarụ sugarụ shuga na-ekpo ọkụ, lactose, syrup malt, molasses, na sucrose. Ugbu a, a na-ewere ụfọdụ shuga ndị a ka shuga dị mma karịa, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala nwee ahụ ike karịa shuga na-edozi ahụ, n’ihi na ha nwere ọtụtụ nri na-adịchaghị mma.
Okpokoro okpokoro na-esite n'usoro nzacha site na okpete ma ọ bụ sugar beet, ebe mmanụ a honeyụ na agave nectar na-erikarị n'ụdị mbụ ha, nke na-eme ka ha nwee ahụike na enweghị nụ. Ma ekwela ka e duhie gị na ị megharịrị nke ọma site n'ịgbanwe site na tebụl okpokoro gaa na mmanụ a rawụ na-edozi ahụ, ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụ na ị na-anwa ọzọ ịbelata nri shuga gị. Sugar Sugar na ihe ị mere bụ dochie otu ụdị shuga na ụdị shuga ọzọ, ọbụlagodi na ụdị ọzọ ahụ nwere ọtụtụ nri na ya.
Chetakwa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nri niile akpọrọ nwere ụfọdụ ụdị shuga, nke ahụ ga-abụkwa ihe dịka nri ehihie ma ọ bụ nri oyi ma ọ bụ sọsọ nri ụtụtụ. N'ihi ya, ọ ga-ewe ụfọdụ ịdọ aka ná ntị ma rụọ ọrụ iji wepu ihe ndị a na nri gị, mana dị ka omume ọ bụla, ka ị na-eme ya, ọ na-adịrị gị mfe ma na-arụkwa ọrụ. nke a bụ mbido dị mma.
N’ọnwa na-abịanụ, gbalịa iji ihe dị nso na nri niile dochie anya carb gị, nke nwere nnukwu shuga. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị rie tost na jam maka nri ụtụtụ ma ọ bụ bagels ma ọ bụ muffins, gbalịa ịgbakwunye ma ọ bụ ọbụna dochie akwa a sie. Mgbe ị gbakwunye protein na abụba ndị dị mma, ị ga-enwe afọ ojuju ngwa ngwa ma hapụ mkpa iji mejupụta nri shuga dị elu.
Ya mere, ebumnuche bụ na ọ bụrụ na ị nwee afọ ojuju n'oge gara aga, ị gaghịzi achọ ma ọ bụ chọọ tost iji nwee afọ ojuju. Ya mere, okwu banyere ndị na-agbanwe shuga ma ọ bụrụ na ịchọrọ ibelata oke nri shuga gị na ị chọghị iji dochie anya ma ọ bụ jiri ndị na-eji shuga enyere gị aka na nke a. N'ihi gịnị? N'ihi na sugar nọchiri dị ka stevia, aspartame, agave atụ ka nri gị akatabi okop ụtọ; ha anaghị enyere gị aka ịtụte nri uto gị na nke ahụ bụ ihe ị ga-eme.
Mana nke ka mkpa bụ na ejikọtara ndị na-agbanwe shuga na ọrịa metabolic na m ga-arụtụ aka na ha na nkọwa ahụ. Ọrịa Metabolic bụ akara ngosi nke gụnyere ọbara mgbali elu, ọbara mgbali elu, cholesterol dị elu, na abụba afọ. Ọ bụrụ n’inwere nke ọ bụla n’ime ihe ndị a niile, ọ ga - eme ka ị bute ọrịa shuga na ọrịa obi.
Yabụ ị drinkingụ nri sodas ọtụtụ ụbọchị apụtaghị na ị meriri agha shuga. N’ezie, i si n’otu nsị gbanwee gaa na nke ọzọ. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ iwelata shuga ị na-a sugarụ, ịkwesịrị imeghe ụzọ.
Gaa ụgbọ mmiri zuru ezu. Adaberela na ndi ozo. Yabụ ịme nke a nwayọ nwayọ, ma ị nwere ike ịmalite site na nnukwu ihe dị ka desserts wee jirizie nwayọ wepụ nri ndị esichara site na iji sugars agbakwunyere.
Ugbu a bụ oge iji mee ihe a n'ihi na ọ bụrụ na iwepụghị nri esichara, ị ka ga na-enwe agụụ desserts na nri ndị ọzọ na-atọ ụtọ nke ị rụsiri ọrụ ike iji tufuo. Isi okwu m bụ na ịkwesịrị inwe ezi uche banyere ihe ị na-atụ anya ya. Ọ gaghị ekwe omume ịghara ịmịnye shuga.
Anyị ka na-enweta fructose site na mkpụrụ osisi na glucose site n'ịgbari carbohydrates dị ka akwụkwọ nri na ọka. Ya mere, ihe ị na-anwa ma ọ bụ na-achọ ime ebe a na-ebelata ego agbakwunyere shuga ka ị ghara iri oke shuga. Ma ozugbo ị na-eri naanị shuga ndị dị na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, ọ ga-esi ike ịnagide shuga agbakwunyere na ị nwetara site na nri ndị edozi.
Ma nke ahụ ga-abụ nnukwu ebe ebe ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu na ịchọghị ịnwe ha ọzọ. Enwere m olileanya na ị ga-esi na ya. M ka na-arụ ọrụ na ya n'onwe m.
O siri ike ịhapụ ịhapụ ihe oriri ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a, pịa bọtịnụ Dị ka ma kesaa ya na enyi ị chere na ọ nwere ike ịbara gị uru.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji gbanye shuga?
Olee otúDetox si Sugar. Aga m abanye na nkọwapụta dị na ntakịrị nkeji, mana ka anyị kwuo maka ụfọdụ ihe dị mkpa tupu ịmalite! Ma ọ́ dịghị ihe ọzọ, i kwesịrị inye onwe gị iseụbọchị. N'ikwu eziokwu, asaa dị mma karịa, ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịgbanye asaa, ị ga-enwe mmetụta ya mgbe ọ gachara iseụbọchị. g.
Ndewo, a bụ m Lisa maka ịme shuga n'efu ma taa, aga m agwa gị okwu banyere iwepụ shuga. Anyị niile maara na oke shuga nwere ike ịbụ ihe ọjọọ nye anyị n'ọtụtụ ụzọ, na enweghị ọtụtụ mgbanwe nri dị ka ịzere shuga nke nwere ike inwe ọtụtụ mmetụta dị mma na ahụike na ahụike gị. Mgbe ị bepụ shuga, ị nwere ike ịtụ anya idalata, nweta anụ ahụ doro anya, nwekwuo ume, hie ụra karịa ndepụta ahụ na-aga n'ihu, mana n'ezie, ịhapụ àgwà shuga anaghị adịkarị mfe, ebe ọ bụ na shuga n’onwe ya na-eri ahụ nke ukwuu.
Gịnị kpatara shuga ji ara ara ara? Fructose, nke mejupụtara 50% nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sugars niile, na - akpata hormone obi ụtọ mgbe ị na - eri nri, nke na - eme ka ọ dị mfe nnwale riri ahụ na nyocha ụlọ nyocha na oke achọpụtala na shuga na - eri ahụ dị ka cocaine. Dịka ọ bụla riri ahụ, a ga-ewepụ shuga, n'ihi ya, m ga-akọwa ihe mgbaàmà na ihe ị ga-atụ anya mgbe ị kụrụ shuga. Gaghị ahụ ihe dị iche n'ụtụtụ ụtụtụ.
Won't gaghị enwe mmetụta dị iche ma ọlị. Nwere ike ịma na ị mere mkpebi iji belata shuga, mana ahụ gị erubeghị. Nwere ike ịnweta agụụ nri n'ụtụtụ ma ọ bụ mgbe nri ehihie ma dabere na ogo gị riri ahụ ndị a nwere ike ịbụ agụụ nri dị nro ma ọ bụ na ha nwere ike isi ike ma ọ bụ ebe a ka ịchọrọ ike.
Ọchịchọ mmadụ nwere ike ịnọ otu ụbọchị ma ọ bụ ọbụlagodi ụbọchị ole na ole, dị nwayọ ma mechaa laa. M na-atụ aro mgbe niile inwe ọtụtụ obi dị ụtọ na nri mgbe ị na-enwe agụụ ihe oriri na ihe ọ bụla ị na-eme iji gbochie gị agụụ. Agụụ bụ onye iro kasịnụ mgbe ị na-achọ ịkwụsị shuga! Mgbe agụụ na-agụ gị, mkpebi gị ga-akwụsị, m makwa nke ọma n'ihi na m nọkwa ebe ahụ.
Ihe mgbaàmà ọzọ ị na-ewepụ na shuga ị nwere ike ịnwe bụ isi ọwụwa, nke nwere ike ibute ngbanwe nke homonụ gị na nsị na-ahapụ ahụ gị, yabụ gbaa mbọ youụọ mmiri buru ibu. Ihe mgbaàmà ndị ọzọ nke iwepụ shuga gụnyere mgbu na ihe mgbu, ọ bụrụ na ịnweta nke a, ọ gaghị adị anya, yabụ nyekwuo gị ezumike nke ọma. Enwekwara ohere ị nwere ike ịnwe obere 'nkwụsị' - nke a na-abụkarị mmetụta nke shuga dị ala, yabụ dịka ịchọrọ, jide n'aka na agụụ anaghị agụ gị ma na-eri nri ụbọchị niile.
Ọ bụrụ na ị na-eji shuga dị ka isi iyi ike n'oge ụbọchị gị ma wepu ya na mberede, ọ pụtara na ahụ gị ga-achọgharịghachi onwe ya ma gbaa abụba maka isi iyi ike, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ihe mgbaàmà ndị a nile nwere ike ịdịru awa ole na ole - ọbụlagodi otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ dabere na ole shuga ị riburu na ogologo oge, mana n'ọtụtụ ọnọdụ ha dị nwayọ nwayọ. Na weebụsaịtị m na-enye ọtụtụ ndụmọdụ ndị ọzọ gbasara otu esi emeso agụụ nri.
Ma ugbu a maka ezi! Ihe mgbaàmà ndị a niile na-adịru nwa oge ma ọ bụrụ na iwepụ shuga na nri gị n'oge na-adịghị anya ị ga-erite uru ma wepu shuga na ndụ gị, dị ka ọnwụ ọnwụ, obere ụfụ ụbụrụ, ụra ka mma, ume ike, na akpụkpọ anụ. O kwesịkwara icheta otú ọ ga-adị shuga mgbe ị na-eri nri. Echetara m iri oke shuga na ọ ga-enye m isi ọwụwa, na-arịa ọrịa, nwee akwara, na-echekwa ụra m.
Nwere ike ịchọrọ ịtụle ihe mgbakwunye n'oge shuga detox. Chromium dị mma maka ịhazi ogo shuga shuga, nke na-eme ka insulin dịkwuo irè ma na-ebelata agụụ nri. Delata magnesium nwekwara ike ịkpalite agụụ mgbe ị kwụsịrị na mbụ, yabụ jide n'aka na ị na-ewere mgbakwunye ma ọ bụ rie nri dị elu na magnesium dị ka mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi na mkpụrụ.
Agbakwunyere m ndụmọdụ ole na ole banyere otu ị ga - esi zere ọtụtụ n'ime mgbaàmà ndị a na blọgụ m kacha nta. Ọ bụ ezie na ị nwere ike inwe ụfọdụ mgbaàmà ndị m kpọtụrụ aha, ekwela ka ha gbochie gị ịme mgbanwe dị mkpa gbasara nri. Na-emere onwe gị ụdị amara a site na ịhapụ shuga niile.
Peoplefọdụ ndị na-atụ egwu na nsị shuga pụtara na ha agaghị enwe ike iri nri dị ụtọ ọzọ. Nke ahụ abụghị eziokwu. A sugar detox will reset the metabolism gị na uto gị.
Will ga-agbaji okirikiri shuga na ị addictionụ ọgwụ shuga ma ị ga-enwe ekele maka ụtọ ahụ nke ukwuu ma ihe ga-atọ ụtọ nke ukwuu. Ya mere ọ bụrụ na mgbe ị gbuchara onwe gị, ọ dị gị ka ị na-eri ihe dị ụtọ, mee ya na usoro gị ma ghara ị toụ ọgwụ ọjọọ. Na nchịkọta, iwepụ shuga bụ n'ezie ihe ọ bụla na-echegbu onwe ya ma ọ bụ na-atụ ụjọ, mana na-aga n'ihu na-eri oke shuga.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nweta elele niile nke ịkwụsịtụ, gaa na websaịtị m. Enwere otutu blọọgụ na ebe ahụ na enyemaka na ndụmọdụ banyere etu ị ga-esi wepụ shuga na ndụ gị. Ọ bụrụ n ’ọ dị gị ka ịchọrọ enyemaka karịa, debanye aha m Mmemme Detoxification Sugar nke 21, nke na-ebugharị gị kwa ụbọchị iji nwetaghachi ikike ị na-eri, na-eme nhọrọ nri nwere ezi uche ma nwekwaa uru niile nke shuga- free nri.
Kedu ihe ga - eme mgbe ị kwụsịrị iri shuga otu ọnwa?
''Gịnwere ike ịnwe ike ọgwụgwụ, isi ọwụwa, ụbụrụ ụbụrụ na mgbakasị. Fọdụ ndị nwere ọbụna nsogbu afọ. ' Ntughari: obu usoro.14wa 14 2019
N'afọ gara aga, amalitere m ịkpa àgwà ọjọọ banyere nri nri. Enwerekwaghị m ikike ịchịkwa ma ọ bụ efere kuki n'efu. Achọpụtara m na omume m nwere ihe ngọpụ dị ka, 'Ọfọn, agara m mgbatị taa.' 'N'ozuzu, nri m mara mma' 'Ọ bụghị na m na-eme nke a kwa ụbọchị'
Ruo mgbe m malitere ime ya kwa ụbọchị, amaara m na ihe ga-agbanwe mgbe m ghọtara na m mepụtara n'oge, ọ bụ ezie na m na-emega ahụ ọtụtụ, nna-gut, n'ihi ya, ekpebiri m ịkpụ shuga maka ụbọchị 30. Ugbu a, ọtụtụ n’ime anyị maara na ị thatụbiga shuga ókè bụ ihe ọjọọ. Obu ihe anyi na akuziri site na nwata.
Ewezuga itinye obere nsogbu na eriri afọ gị, enwere nsogbu ndị siri ike karị nke nwere ike ibute na ị sugarụ oke shuga. Ọ nwere ike imebi metabolism gị, bute ọrịa shuga nke ụdị 2, mee ka ohere ịnweta imeju ma ọ bụ mmebi akụrụ, mbufụt nke anụ ahụ na-akpata mgbu obi na nkwonkwo, ire ere ezé, ọbụnakwa na-enwe nsogbu ịnọgide na-arụ ụlọ. Nke a nwere ike bụrụ isi kpatara - mba, ọ bụghị isi ihe kpatara ya, wepụ ya n'isi gị.
kọfị prostate cancer
Ọzọkwa, na mgbakwunye na ihe ọjọọ niile a ọ na-eme n'ahụ gị, ọ na-erikwa ahụ. Ya mere amaara m ihe mbụ m chọrọ ime ugbu a bụ ịchọ ụlọ m niile wee chọta ihe niile agbakwunyela shuga ma wepụ ha n'ụlọ m. Ya mere, ka anyị mee nke a ugbu a.
Amaara m na ọ na-eri ezigbo shuga, mana na-agụghị akwụkwọ mmado ma na-egwu ala n'ime nri na nri kwa izu, agaghị m ama n'ezie. N'ezie, enwere ụfọdụ ihe ndị ejighị akpọrọ ihe. A na-ebubata ude mmiri, a na-etinye nri nri chọkọletị, ihe ọ onceụ drinkụ m kwa ọnwa.
Ma ọ tụrụ m n'anya ịhụ ọtụtụ shuga na ogwe protein m; nri ụtụtụ m bụ nri ụtọ. Ọbụna achịcha m zụtara bụ gram 5 / iberi Ọ bụrụ na ị dị ka m ma nwee obere njide onwe onye Nanị ihe ị nwere ike ime iji nwetaghachi njikwa bụ ịgbanwe gburugburu gị kpamkpam Ọ gaghị ekwe omume iri nri, na ị gaghị azụta na weta ụlọ gị na nke mbụ Ya mere ihe niile ahụ nwere ga-aga Ọchịchọ ahụ kacha njọ na ụbọchị ole na ole mbụ, mana ọbụlagodi otu izu mgbe nke ahụ gasịrị, m na-alụ ọgụ n'abalị, ọ dị mma ka m nọrọ na nsogbu a na-enweghị shuga ruo asaa ụbọchị na nke a nwere ike bụrụ abalị kachasị sie ike mana ihe dị ka nkeji iri anọ na ise gara aga enwere m agụụ maka shuga na ebum n'uche m wee gaa kọfị nri ehihie m wee gosi gị ụmụ nwoke ihe m hụrụ Nke ahụ bụ nyocha ya mana m ka nwere ọtụtụ ajụjụ gbasara shuga Kedu ụdị shuga m kwesịrị ịnwe ka anyị zere? Na ole bụ nke ukwuu? N’ihi ya, m rịọrọ enyi m Becca Shern ka o nyere m aka n’ihe ole na ole. Ọ bụ onye na-eri nri na-edebanye aha na onye guzobere Minimal Wellness.
Enwere m olile anya na ị ga - enyere m aka ịda mba mgbe ndị mmadụ họọrọ iwepụ shuga na nri ha, kedụ ka ọ na - adị, ụdị shuga ndị mmadụ na - achọkarị ịhapụ? ? - Imirikiti mmadụ, mgbe ị na-achọ izere shuga, kwuo maka shuga agbakwunyere. Ya mere shuga a na-agbakwunye na nri edozi. Nke a dị ka okpokoro okpokoro ma ọ bụ mmanụ a honeyụ ma ọ bụ syrup ọka fructose dị elu, 'My King, syrup ọka a ka a napụtara' A na-atụ aro ka ị nọrọ ebe - mana ka ọ dị, ihe na-erughị 5% nke calorie gị site na gbakwunye shuga.
Maka nri kalori 2000, nke ahụ bụ gram 25 nke shuga agbakwunyere, ọ tụgharịrị na agbakwunye shuga nwere ike ịgbakwunye ngwa ngwa. Mgbe mmuo ochie m na-atụba nri n'ọnụ m, mmuo ọhụrụ m bụ ịlele azụ ngwugwu ma wee tụnye Natalie na nri m. n'ime otu ọnwa.
Dị nnọọ ka ụbọchị ụfọdụ dị ezigbo ala, ụbọchị ụfọdụ dị mma. Nke ahụ bụ ebe ị nwere mgbanwe iji nwee eji megharịa ọnụ na oge pụrụ iche. Echere m na anyị tufuru ụzọ anyị dị ka ọdịbendị n'ihi na anyị enweghị shuga ọzọ maka desserts ma ọ bụ oge pụrụ iche, nri? Ọ dị ka ihe niile n'ihi na anyị na-eri nri esichara nke ọma, ee, ọ dịkwa ịtụnanya n'anya m dịka m hụrụ Fed Up na ndị akwụkwọ akụkọ ahụ, agụọla m ọtụtụ blọọgụ gbasara shuga dị n'ihe niile m maara mana mgbe ahụ ihe ụfọdụ tụrụ m n'anya dịka my granola bar dị ka shuga 30g ma ọ dịka m, ọ bụ ya mere m ji atọ ụtọ nke ọma! ma o siri ike m chere na ọ na-ewe ọtụtụ, dị ka ile anya na ihe niile ịzụrụ ma ghọta n'ezie na ọ bụrụ na ọ dị ụtọ nke ukwuu ịbụ eziokwu, ọ nwere ike ee.
Ee, ama m, enwere ihe kpatara ndị na-emepụta nri ji etinye ọtụtụ shuga. Ọ na-atọ ụtọ nke ọma, ọ na-eme ka ịchọrọ ịzụta ya ọzọ. Nke ahụ dị mfe.
Nsogbu ya bụ, ọ jọgburu anyị. Becca chere na ihe ịma aka m na-enweghị ụbọchị 30 bụ ihe dị mma n'ịghọta otú ahụ m si emeghachi omume na shuga. Ma kwusikwara ike mkpa nri dị mma na nke kwesịrị ekwesị.
N'ikwu eziokwu, anaghị eri nri m nke ọma mgbe niile ma ọ nwere ike ịdị ụkọ mgbe ụfọdụ. Ọ dị mma, ya mere, nri abalị n'abalị a nwere ike ịkọwa dịka nnukwu efere nri. Ka m gosi gị ihe anyị na-arụ ọrụ ebe a.
Anyị nwere osikapa gị, ọkụkọ gị, na anụ ezi anyị na-atụ aro kwa ụbọchị. Ekwesịrị m irikwu akwụkwọ nri. Ana m amata nke ahụ ugbu a.
Aga m ebido ya. N'oge na-adịghị anya, mana anụ ezi mbụ. Ekwesighi m ị addictionụ ọgwụ ike shuga dị egwu n'ihi na enweghị m isi ọwụwa ma ọ bụ nnukwu nhụjuanya na-abụghị agụụ abalị.
Iji lụsoo agụụ nri ndị ahụ ọgụ, m Iụrụ tii dị ka onye nnọchi. Nke ahụ nyeere m aka mee ka uche m ghara ịdọpụ uche. Egwu kachasị m na mkpali maka isonye na nsogbu a ụbọchị 30 bụ n'ihi na amaara m obere mgbanwe nwere ike ime nnukwu ihe.
Ugbu a, mgbe m na-ekwu maka obere mgbanwe, ọ na-ezokarị aka na mgbanwe dị mma, mana ọ na-arụkwa ọrụ na-abụghị akụkụ. Omume dị ka nri nri na-eri nri, nwere ike iwulite ma bute ihe ka njọ. “Gịnị ka ị na-ele?” Make na-eme ngọpụ ndị a na izi ezi, mana oge ụfọdụ ịkwesighi ime ha n'ihi na agwa ọjọọ ahụ na-arapara na ị na-agba ọsọ na autopilot.
Enwere m obi ekele na m si tupu nke ahụ pụọ, tupu ọ ka njọ. N'oge gara aga, atụkwasịrị m obi na smoothi ​​iji nweta ọtụtụ vitamin m, ma dị ka akụkụ nke ihe ịma aka ahụ, achọrọ m bepụ mkpụrụ osisi. N'agbanyeghị na ha nwere vitamin, nri, na fịba nke baara gị uru, achọrọ m ịmanye onwe m irikwu akwụkwọ nri.
Mgbe ụbọchị iri mbụ gachara, amalitere m ịkwadebe ma rie nri mara mma maka nri abalị. M ga-eri azụ na osikapa agba aja aja na sauteed kale Salads ghọrọ nri kachasị amasị m n'ihi na ha dị mfe ma dịkwa mfe ịkwadebe. Anyị nwere kọlọtọ nwere obere osikapa na nchara nchara na kale.
Na kale, ejiri m ọkụkọ ọkụkọ sie ya, nke m na-a drinkụ ebe a. Ọ dị ka nri abalị bachelorette. Natalie bụ n'ezie a otutu mma karịa m na kichin.
M na-erikarị nri mgbe ọ na-esi nri ma na-eri ihe maka ịhụnanya maka nri. 'Nke a mara mma nke ukwuu' 'Lelee ya: okpukpu abụọ, enweghị m ihendori.' Achọtara m ebe m na-arụ ọrụ na nnọchi maka nri niile dị na shuga.
Kama mkpụrụ fig m jiri mọstad, kama mmanya m jiri mmanụ oliv na tuo lemon dị mma, jiri obere nnu na ose chọọ ya mma. Mgbe izu atọ gachara, achọpụtara m na ike m na-adaziwanye. Akwụsịrị m inwe nnukwu swings si dị elu ruo na obere ume ụbọchị niile, ọkachasị ebe m na-agba mbọ ịhazi nri m na protein, carbohydrates, inine na obere anụ ezi.
Yabụ ihe ị na-ahụ bụ ike ike, mana ọ bụ mmụba shuga nke ọbara mgbe ị nwere ọtụtụ sugar agbakwunyere na nri gị, ị nwere ike ibute nnukwu mgbanwe na ọkwa shuga ọbara gị nke na-eme ka ọ dị gị ka ị nwere nnukwu ume, ma mgbe ahụ ị dị nsọ, ị na-ada ma ị nweghị ume. Na mgbe ahụ ihe ị na - eme mgbe ị na - eche na ike gwụrụ gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya, ka ihe ọ bụla na - enye gị ike ngwa ngwa, nke bụ shuga. Ya mere, mgbe ịlaghachitere, ọ na-adị gị mma nwa oge, wee daa ọzọ.
Na mgbakwunye na ike kwụsiri ike karị, achọpụtakwara m oke mbelata nke afọ nna m. Ọ pụọghị, ma ebili mmiri agbanweela. Ọ dị mma, ya mere, ihe ịma aka ụbọchị 30 agafeela ma enwere m ezigbo mma, ọ dị m ka ọ dị mma, enwere ihe ole na ole m gbanwere n'ime ụbọchị 30 gara aga dị ka mgbatị ahụ, ma ugbu a anaghị m agagharị , Ebipụla m carbs m, n'akụkụ ụfọdụ n'ihi na ịbelata shuga agbakwunyere na ọ na-esiri ike ịkọwa kpọmkwem pasent nke uru m nwetara site na igbutu shuga.
Iji zuo otu akpaokwu na Dan Harris, m ga-asị na enwere m ike karịa 10%. O doro anya na ọ bụ nnukwu ọdịiche na ike m na etu obi dị m kwa ụbọchị, ọ dịkwa mma igbochi agụụ ndị ahụ n'ihi na onye ma etu ọ ga-esi nweta ma ọ bụrụ na m ga-enwe ike ịmị nri ma na-agagharị. Papa m gootu nwere ike bụrụ na ọ ga-abụrịrị na nne ochie, nke ga-abụrịrị egwu.
Ma na-aga n'ihu. M hụrụ ihe ụtọ ụtọ, m hụrụ desserts n'anya, nnukwu onye ofufe, achọghịkwa m iwepụ ya kpamkpam n'ihi na echere m na ndụ a anyị ga-anụrịrị ụtọ ihe, mana achọrọ m iweghachi ya na oke. Ya mere malite na ọnwa na-abịa.
Aga m na-eme a otu nri otu ugboro n'izu malite echi. Ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu na-agbanwe agbanwe, ịse ihe nkiri, azụmaahịa na ụdị ndụ, gaa patreon.com/mattdavellaNweta ohere niile nke m gbara ajụjụ ọnụ, dịka mkparịta ụka mụ na Becca Shern, 'Nsogbu Ihi ụra Bụ Ọrịa Na Anyị Society ', Debanye aha taa ịnata vidiyo iri na asatọ na vidiyo Podcast asaa n'otu ntabi anya, yana ọdịnaya ọhụụ kwa ọnwa, yana mgbe ị zutere ụbọchị iri atọ ndị a, m na-eme ha niile n'afọ ma kpọsaa ha na ebe 3: akwụkwọ akụkọ m, Twitter na Instagram.
Nwere ike ịchọta njikọ ndị a na nkọwa dị n'okpuru. Daalụ maka ikiri. Oh, nke ahụ bụ mmeghe, ana m arịa ọrịa, afọ m na-afụ ụfụ.
Eri m dị ka donut na ọkara ma m ka dị egwu. O dikwa egwu. Lee anya na nke a, nke a adịghị mma, aga m enye mmadụ onyinye a dịka onyinye. 'Ee, daalụ maka ịnara onyinye ndị a' 'I meela!' 'Ehee' 'bye' 'ụbọchị ọmụmụ! 'Daalụ nke ukwuu'
Kedu ihe ga - eme ma ị kwụsị iri shuga ruo ụbọchị iri atọ?
Chalaghachi na kwukwarashugabụ ezigbo ụzọ iji belata ọbarashugana insulin, ọ bụrụgodịgịnaanị mee nke a obere oge. Otú ọ dị, ọ bụrụgịbipụ agbakwunyereshuga ruo ụbọchị 30ma laghachi na elunri shugamgbe nsogbu ahụ gafere, uru ndị a ga-efu ngwa ngwa.26bọchị 26 2021
Nwere ike iri mkpụrụ osisi na shuga detox?
O nweghi oke nri dị iche iche, managịAga m ezere nri nwere nnukwu GI.Mkpụrụ osisina akwụkwọ nri:I nwere ike iri nriỌtụtụ n'imemkpụrụ osisina akwụkwọ nri, ma zere ole na ole (dị ka parsnips, anyụ, na painiapulu). Mkpụrụ ọka: A na-ahapụ achịcha zuru oke na pasta, osikapa agba aja aja, na oatmeal.Mar 27 2020
Mbelata shuga ọ ga-ebelata abụba afọ?
Otu ebe dị mma ịmalite ịmalite nhọrọ nri gị bụ iwepụ ihe ọ sugụ drinksụ shuga - ọ bụghị naanị soda, kama ihe ọ juụ juụ.Sugarna-abawanyeafọ abụbana eririna-ebelata afọ abụba; yabụ mgbe ị na-anụ mkpụrụ osisi, ị na-ewepu eriri, na-ahapụ dị ọchashuga.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ịkwụsị shuga ruo ụbọchị 30?
Ọ bụrụ na ịbipụ agbakwunyereshuga ruo ụbọchị 30naanịkalaghachikanri nke etinyere na yashuga, uru nke ịgbakwunye ihe gbakwunyere-shuga-nri nri efu ga-efu ngwa ngwa. Uru ndị a metụtarakambenata gbakwunyereshugaN'izugbe.02.26.2021
Kedu ihe ịma aka Sugar 7 ụbọchị?
Na7-Llebọchị Nsogbu SugarEzubere iji nye usoro dị mfe iji belata agbakwunyeshugamaka gị na ezinụlọ gị. Onye ọ bụlaụbọchịAkwụkwọ akụkọ New York Times ga - ekenye ọnụ maka otu esi belata agbakwunyeshuga. Na iji nyere gị aka ime ka ndụmọdụ ndị ahụ rụọ ọrụ, aga m ekekọrịta ụzọ esi (ma ọ bụ abụọ) site na akwụkwọ ọhụrụ m.Jenụwarị 3 2020bọchị 2020
Nwere ike iri unere na shuga na-enweghị nri?
Nashuga-free nrina-egbochi ya, yana ndepụta nke nri 'enyere' (dị ka ọka niile, blueberries, na mkpụrụ osisi mkpụrụ vaịn) yana 'anaghị anabata' nri (dị ka achịcha ọcha,unere, na mkpụrụ vaịn).Mkpebi 29 2019
Kedu ihe ga - eme ma ị hapụ shuga ruo ụbọchị iri atọ?
Ọ bụrụgịbipụ agbakwunyereshuga ruo ụbọchị 30ma laghachi na elushuganri, uru ahụike nke agbakwunyereshugaMbelata ga-kagbuo si. Dịka nri ọ bụla na - egbochi mmadụ, isonye na a30-ụbọchị enweghị shugaịma aka nwere ike ibute idozi nri na-edozi ahụ na-adịghị mma.26bọchị 26 2021
Etu ị ga - esi mebie ị sugarụ ọgwụ shuga gị n’ime ụbọchị iri?
Dr. Mark Hyman na-akọwa nyocha ọhụụ gosiri na shuga na-eri ahụ nke ndu; ka ị na-erikwu shuga, otú ahụ ka ọ na-agụsi gị agụụ ike. Ozi ọma ahụ bụ na ndị mmadụ nwere ike ịkwụsị ị addictionụ shuga na ụbọchị 10. Download Nduzi Ọgwụgwọ Ọgwụ Ọrịa: ccf.org/FMGetstarted
Etu aga - esi gbanahụ ọgwụ shuga na atụmatụ mgbapụ?
Atụmatụ Sugar Addiction Escape Plan 1 Tinye nlekọta onwe gị. 2 Mee ka shuga dị n’ọbara gị kwụsie ike. 3 Were onwe gị dịka ị nọ na nhichapụ. 4 Elekwasịla anya na ibu ibu. 5 Mara ezigbo uru ị bara. 6 Mepụta gburugburu ebe nkwado. 7 Bụrụ onye nyocha. 8 Chegharịa sugars adịgboroja. 9 Naanị ịmalite. 10 Gbaghara onwe gị.
Etu esi ekpochapu ihe ndi ichoro shuga n'ime ubochi ato?
mmanụ ọkụ shuga na-achọsi ike. Kwụsị gluten na dayari. ụbọchị atọ, ị ga-enwe ike karịa na agụụ na-agụ gị. Sra. otu abalị, ọ nwere ike ịchụpụ gị ka ị rie calorie ndị ọzọ. Nwere ike ịkwụsị àgwà shuga. Ime nhicha apụtaghị na ị gaghị eri kọfị ọzọ. Mana ọ na - enye gị ikike ịchịkwa agụụ gị na ahụike gị.